पे्रसिडेन्सियलमा न्यून शुल्कमा अमेरिकी डिग्री - Karobar National Economic Daily
पे्रसिडेन्सियलमा न्यून शुल्कमा अमेरिकी डिग्री
query_builderSeptember 8, 2017 10:27 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility301
लक्ष्मण केसी कार्यकारी निर्देशक, पे्रसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमा नै यहाँका विश्वविद्यालयको भन्दा पनि सस्तो शुल्कमा (अमेरीकन डिग्रि) लिन चाहने विद्यार्थीहरुका लागि पे्रसिडेन्सियल विजनेश स्कुल उपयुक्त स्थान भएको कलेजको भनाई छ । पे्रसिडेन्सियल विजनेश स्कुलको एमविए र विविएको सम्पूर्ण पढाई (रि–सर्च एवम् केसबेश) हुनुका साथै सम्पूर्ण अध्यायन कम्प्युटर बेशहुने भएकोले अहिलेको डिजिटल एजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन मद्दत पुग्दछ ।
१) विद्यार्थीहरुले किन यो कलेज रोज्ने ?
अर्को कुरा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हामी सर्वशुलभ रुपमा प्रदान गरिरहेका छौं । यसको अर्थ चाहिँ गुणस्तरमा कम्प्रमाईज भएको छ की भनेर कसैले शंका गर्नु पर्दैन । हामीलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने युनिभर्सिटीले सामाजीक उत्तर दायीत्व (सिएसआर) अन्तर्गत निकै कम शुल्क लिएर हामीलाई अनुमति दिएको छ ।
त्यसले गर्दा पनि हामीले अमेरिकन एजुकेशन सर्वसुलभ रुपमा नेपालमा उपलब्ध गराएका छौं । विविए डिग्रि हासिल गर्न विदेशमा कम्तिमा ५० हजार डलर खर्च गर्नुपर्छ भने यहाँ त्यही डिग्रिरु. ७ लाख १५ हजार मात्रमा हासिल गर्न सकिन्छ । एमविएका लागि कम्तिमा ४० हजार डलर लाग्छ तर नेपालमा रु. ६ लाख १५ हजारमा २ वर्षको कोर्ष पुरा गर्न सकिन्छ् ।
२) नेपालमै यस्ता खाले विश्व स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरु हुँदाहँुदै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा नेपालबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्ययार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ । विदेश जाँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छैन् । नेपालबाट विदेश पढ्न जाने भनेका अधिकांश मध्ययम वर्गीय विद्यार्थीहरु नै हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले त्यहाँको विश्वविद्यालयहरुले तोकेको शुल्क र आप्mनो खर्च आफै जुटाउन पर्छ ।
अभिभावकले नेपालबाट पढाईको लागि पैसा पठाउन सक्दैन बरु विदेशमा रहेका आप्mना सन्तानबाट नै पैसाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उता विद्यार्थी भिसामा त्यहाँ पुग्नेले निश्चित समयमात्रै काम गर्न पउछन् । मैले अगाडी नै भनीसके त्यहाँको पढाई कति महंगो छ भनेर, जसका कारण धेरैले त पढाई खर्च र बसाई, लवाई–खवाईको खर्च धान्न नसकेर विचैमा पढाई छोड्छन् र इ–लिगल रुपमा वा अन्य वैकल्पिक उपाय गरेर त्यहाँ बसिरहेका हुन्छन् ।
ग्याप गरेर २ बर्षको पढाई ५–६ बर्षमा पुरा गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्यहुन्छ । अर्कातिर नेपालबाट विदेश पढ्न जाने वेला लिएको रकम वा ऋण तिर्ने बोझ त हुन्छ नै जसले पढाई पुरा गर्न चाहानेलाई समेत असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालमा नै अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा पाइन्छ भने किन विदेश जाने?
३. अमेरिकन डिग्रि भन्ने तर नेपाली कोर्ष पढाउने हो त होइन ?
अरुले के गर्दछन् मलाई थाहा भएन–हामी कहाँ अमेरिकन कोर्ष नै पढाई हुन्छ । कोर्ष करिकुलम, सिलेबस, बुकहरु अथवा सबै टेक्सहरु अमेरिकन युनिभर्सिटीको नै पढाई हुने हो । हामी कहाँ हामीलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयबाट तालिम प्राप्त प्रोफेसरहरुले क्लास लिनुहुन्छ । विद्यार्थीहरुले युनिर्भसिटीको एमआइएस सिस्टममा आफ्नो असाइमेन्टहरु पोष्ट गर्दछन् र अमेरिकन प्रोफेसरहरुले त्यसको अनुगमन तथा ईभ्याल्युसन गर्ने गर्दछन् ।
यो क्वालिटी कन्ट्रोल मेकानिजम हो । यदी हामीले यहाँको टेक्स पढाउने हो भने विद्यार्थीहरुले असाइमेन्टहरु गर्नसक्दैनन् ती विद्यार्थीहरु फेल हुन्छन् । हामी कहाँ पढेका विद्यार्थीले अमेरिकाको भन्दा राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने दाबी छ । किनकी हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पढाईका अतिरिक्त थुप्रै विषयमा हामी ईनपुट दिन्छौ त्यो कुरा पनि मैले माथी नै उल्लेख गरि सकेको छु । अमेरिकामा गएर पढ्दा त्यहाँ आफैले गर्ने हो जे गरे पनि, कसैले तपाईलाई केयर गर्दैन ।
४) स्वदेशमा नै अमेरिकन डिग्रि हाँसिल गर्दा र विदेशमा गएर त्यहीँ डिग्री प्राप्त गर्दामा के फरक पर्छ ?
एकातिर त नेपालमा निकै सस्तो शुल्कमा पढ्न पाईन्छ भने अर्कातिर नेपालमा हरेक विद्यार्थीले पर्शनल केयर पाउँछ । उता जाँदा त्यो केयर पाउँदैनन् । आफै आर्जन गरेर पढ्ने हुँदा पढाइमा राम्रो ध्यान दिन पनि सक्दैनन् जसको कारण जसले कोर्स पुरा गर्दछन् तिनीहरुको अध्यायनको स्तर पनि राम्रो नहुनसक्छ । हो छात्रवृत्तीका गएर पढ्नेहरुको कुरा बेग्लै हो । त्सकारण पनि हामी दाबी गर्छौ की अमेरिकन स्ट्यान्डरको शिक्षा हामीले हाम्रो कलेजबाट प्रदान गरिरहेका छौं ।
५) के नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालमा रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेर यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ?
नेपालमा नै मिहनत गर्ने लगनशील विद्ययार्थीका लागि प्रशस्त ठाउँ छन् । कर्पोरेट सेक्टरले योग्य ब्यक्तिहरु नपाइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि म्यानजमेन्ट ऐजुकेशनको कुरा गर्ने हो भने विविएमा वर्षमा जम्मा ४–५ हजारको हाराहारीमा ग्राजुयट हुन्छन् भने एमविएमा त जम्मा जम्मी २ हजारको हाराहारीमा मात्र ग्राजुयट हुनेहुन ।
जब मार्केटलाई हेर्ने हो भने ग्राजुयट हुनेको संख्या निकै न्युन हो । यसको अर्थ, कम्पनीले आवश्यकता छ भन्दैमा जो पायो त्यो ब्यक्तिलाई हायर गर्दैन् । कम्पनीले क्वालिफाइड ब्यक्ति नै खोज्छन् । किनकी रोजगारी दिए पछि त्यसको प्रतिफल खोज्नु स्वभाविकै हो । हाम्रो कलेजबाट ग्रयाजुयट भएकाहरु कोही पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छैन् । कलेजमा जबप्लेसमेन्ट सेल नै छ ।
यदी विद्यार्थीलाई पढ्दा पढदै पढाई शुल्क तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा समेत हामी जबमा लगाइदिने गर्दछौं । जबप्लेसमेन्ट सेलले हरेक वर्ष जबप्लेसमेन्ट सप्ताहको आयोजना गर्दछ र त्यहाँ बिभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको उपस्थीती रहन्छ र कलेजबाट नै हायर गरेर समेत विद्यार्थीहरुलाई जबमा लैजाने गरेका छन् ।
६) यो कलेजबाट पढाई सम्पन्न गरेर विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुले पनि यहाँबाट पास आउट हुने विद्यार्थीहरुलाई जबमा लगाउन कुनै भुमीका खेल्छन् ?
अवश्य नै । उनीहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र उनीहरुले पनि प्लेसमेन्ट सेलमा आप्mनो तथा आफु कार्यरत संस्थामा जब भ्याकेन्सी छ भने पठाई दिने गरेकाछन् । जसले गर्दा पनि हाम्रा विद्ययार्थीहरुलाई काम खोज्न कुनै झन्झट नै हँुदैन् ।
७) नेपालबाट विदेश जाने सस्कृति नै बनेको छ । रोजगारी वा पढाइको लागि विदेश जाने चलनले भविष्यमा नेपाललाई कस्तो असर गर्छ ?
हो यो सत्य हो पछिल्लो समयमा विदेश जाने सस्कृति नै बनेको छ । त्यसलाई रोक्न सरकार तथा सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । युवा विना देश विकासको सम्भवना नै छैन् ।
विदेश जानेमा सबै युवाहरु भएकाले यसले देश विकासमा समेत असर गर्छ । विदेश रोजगारी वा पढ्न गएको ब्यक्तिको उर्जाशिल समय विदेशमा नै विताउने गरेको पाइन्छ । रोजगारीको निम्ती मलेसिया एवं खाडी मुलुकमा जानेहरुको कथा–व्यथा जस्तै अवस्था छ पढाईको निम्ती अमेरिका, युरोप वा अस्ट्रेलिया जानेहरुको पनि ।
तैपनि हाम्रो समाजमा मेरो छोरा अमेरिका, अस्ट्रेलिया छ भन्ने कुरालाई समाजिक प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्न थालियो । जबकी त्यहाँ आफ्नो छोराले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुराको मतलव छैन् । यस्ता सेचाइले नेपाललाई भविश्यमा समाजीक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो भडखालोतीर पु¥याउँछ
। सिधै रोजगारीका निम्ती जाने युवा बाहेब पनि अध्यायनको लागि भनेर पढे–लेखेका युवाहरु गतवर्ष मात्र ५१ हजारको हाराहारीमा विदेशीएका छन् । यो संख्या हरेक वर्ष १५–२० प्रतिशले वृद्धी भईरहेको छ ।
जसले गर्दा देशमा एउटा पोइन्टमा गएर बुढाबुढी र बालबच्चा मात्र हुने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन् । अर्का तर्फ हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति विदेशबाट अपूर्ति गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । अर्काको देशमा गएर नोक्कर बन्नुभन्दा स्वदेशमै मालिक बन्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् त्यता तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अमेरिका पे्रसिडेन्सियल विजनेश स्कुल एफिलेशन